အောင်လံမြို့၌ နွားဈေး မြင့်တက်နေမှုကြောင့် အသားဈေး မြင့်တက်နေသော်လည်း နွားသားရေဈေးကွက်? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့၌ နွားဈေး မြင့်တက်နေမှုကြောင့် အသားဈေး မြင့်တက်နေသော်လည်း နွားသားရေဈေးကွက်?
မကွေး၊ မတ် ၁၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်တွင် နွားဈေးမြင့်တက်နေမှုကြောင့် အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများ ဈေးမြှင့်ရောင်းချနေသော်လည်း နွားသားရေဈေးကွက်မှာ ဝယ်လက်မရှိဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်တော်တို့က အသား ဈေးကိုတက်ပြီးမရောင်းချင်ပါဘူး။ အခုရောင်းချနေတဲ့ဈေး တောင်လစဉ်အရှုံးပေါ်နေတယ်။ ကုန်ကြမ်းနွားဈေးက တအားမြင့်တက်နေတော့ ကုန်ချောအသား ဈေးကိုလည်း တက်ရောင်းနေရတာပါ။ နောက်ပြီး ဒီနှစ်မှာနွားသားရေကို ဝယ်လက်မရှိဖြစ်နေတယ်” ဟု အောင်လံမြို့မ အမဲလိုင်စင်ရသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ယခုအခါ အမဲသားဈေးမှာတစ်ပိဿာ ငွေကျပ် ၁၈ဝဝဝဈေးအထိ မြင့်တက် နေသဖြင့် စားသုံးသူများအကြား ဝေဖန်မှုများမြင့်တက်နေကာ ဝယ်ယူစားသုံးမှုကလည်း လျော့ကျနေသည်။ ”ကျွန်တော်တို့စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ လေလံစည်း ကမ်းတွေအတိုင်း စနစ်တကျနဲ့ ပြဿနာမဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်း ပေးနေပါတယ်။ လိုင်စင်သမားအနေနဲ့က ကုန်ကြမ်းဈေးကြီးမြင့်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ မြို့မဈေးကြီးအတွင်းမှာ တော့ ရောင်းချသူနဲ့ ဝယ်ယူသူအကြားမှာပြဿနာဖြစ်တာမရှိပါဘူး”ဟု မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား သည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း အမဲသား (သီးသန့်) တစ်ပိဿာ ကျပ်ရှစ်ထောင်ဈေးဖြင့်ရောင်းချရန် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တွင်ပါဝင်ပြီး မြို့မအမဲ(၁)လိုင်စင် ကြေးမှာ ကျပ် ၃၁၉ သိန်း၊ မြို့မ အမဲ (၂) လိုင်စင်ကြေးမှာ ကျပ် ၃၁၉ သိန်းဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံးမှသိရသည်။
”အမဲသားဈေးက တစ်ပိဿာ ကျပ်၁၈ဝဝဝ ဈေး၊ ဆိတ်သား ဈေးကတစ်ပိဿာ ကျပ်၂ဝဝဝဝ နီးပါးဆိုတော့ အသားဈေးနား မကပ်နိုင်ဘူး။။ အဆင်ပြေတဲ့သူ တွေကတော့ အသားဈေးကြီးလည်း ပေးဝယ်စားကြတာပေါ့ဗျာ။အများ စုကတော့ အသားဟင်းကို ချက်မ စားနိုင်တာ ကြာပါပြီဗျာ”ဟု ဒေ သခံတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း နွားဈေးကွက်တွင် နွားတစ်ကောင် လျှင် ကျပ်၁ဝ သိန်းအထက်မှ ကျပ် ၁၅သိန်းအထိရှိနေပြီး နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှ နွား အကောင်လိုက် ပြည်ပသို့တင်ပို့ မှုအတွက် အများဆုံးရောင်းချနေ ရကြောင်း သိရသည်။
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ သရက်သီးပွဲတော် (၂ဝ၁၉) မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပမည်
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော်အတွင်း အဝတ်အထည် အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှ အရက်ဘီယာများ ဖမ်း
ဘင်္ဂါလီများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ ICRC နှင့် MRCS တို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့နေသဖြင့် ဒေသခံများ ?
ဟွာဝေး ကုမ္ပဏီကြီးက အမေရိကန်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်မှုများ အဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်၍ ကုမ္ပဏီ၌ လုပ်
ပီအက်စ်ဂျီ နည်းပြဟောင်း အူနိုင်း အမ်မရီကို အာဆင်နယ် နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် နီးစပ်နေ
တိုင်းရင်းသား ဒေသရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများအတွက် Teaching Assistant လျှောက်လိုသူများ အောက်တိုဘာ လကုန် ??
ဘာစီလိုနာ ကစားသမားများတွင် ဆုဖလား အများဆုံး ရသူအဖြစ် မက်ဆီ စံချိန်တင်
ကိုယ့်အသံကို အားနည်းချက် လို့ မမြင်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
အမေရေယဉ်နတ်ပွဲ ဇီးတော အပြင်နန်းတွင် နတ်ဆက်ပွဲတော် လာသူများဖြင့် စည်ကားနေ
‘ဝ’ ဒေသ မိုင်းမောမြို့ သိုလှောင်ရုံတစ်ခုတွင် ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်